I-WTTC: Icandelo lokuhamba kunye noKhenketho eFransi lizimisele ukubuyisela ngaphezulu kwesithathu kulo nyaka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » I-WTTC: Icandelo lokuhamba kunye noKhenketho eFransi lizimisele ukubuyisela ngaphezulu kwesithathu kulo nyaka
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Ukubambisa • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Shopping • Theme Parks • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-WTTC: Icandelo lokuhamba kunye noKhenketho eFransi lizimisele ukubuyisela ngaphezulu kwesithathu kulo nyaka.
I-WTTC ithi ukukhula kwecandelo kulo nyaka kulindeleke ukuba kunyuke ngaphambi kokuchacha kwe-Yurobhu ngokubanzi ngama-23.9%, kunye nokuchacha kwehlabathi ngama-30.7%.
IFransi kulindeleke ukuba ibuyise icandelo lokuHamba kunye noKhenketho ngaphambi kwe-UK neYurophu.
Ukuba amanyathelo abalulekileyo ayalandelwa, icandelo lokuHamba noKhenketho linokubona amanani engqesho edlula amanqanaba angaphambi kobhubhane ngo-2022.
Ngo-2019, igalelo lecandelo lezoKhenketho laseFransi kwi-GDP limele i-211 yeebhiliyoni zeedola (i-8.5% yoqoqosho lwelizwe).
Uphando olutsha oluvela kwi IBhunga leHlabathi lezoKhenketho noKhenketho (WTTC) idiza ukuchacha kwecandelo lezoHambo noKhenketho lwaseFransi kunokukhula nge-34.9% kulo nyaka.
Ezi ndaba ziza ngosuku i-WTTC, emele icandelo lehlabathi lokuHamba noKhenketho, amaLungu ayo, kunye neenkokheli zoshishino ezivela kwihlabathi jikelele, ukuya eParis kwi-Destination France summit.
Iququzelelwe nguMongameli Emmanuel Macron kunye nentetho yokuvula evela WTTC USihlalo kunye noMongameli kunye ne-CEO yeCarnival Corporation & plc, u-Arnold W. Donald, umsitho uza kugxila ekuqhubeni abahambi babuyele kwindawo eyayingaphambi kobhubhane, yeyona ndawo idumileyo yehlabathi.
WTTC ithi ukukhula kweli candelo kulo nyaka kulindeleke ukuba kunyuke ngaphambi kokuchacha kweYurophu kukonke ngama-23.9%, kunye nokuchacha kwehlabathi ngama-30.7%.
In 2019, Fransi Igalelo lecandelo lezoKhenketho kwi-GDP limele i-211 yeebhiliyoni zeedola (i-8.5% yoqoqosho lwesizwe).
Ngo-2020, xa ubhubhane wamisa uhambo lwamazwe ngamazwe, igalelo lecandelo lokuHamba noKhenketho lehla laya kutsho kwi-108 yeebhiliyoni zeedola (i-4.7% yoqoqosho lwelizwe).
Nangona kunjalo, ngokutsho kophando lwamva nje, kwinqanaba langoku lokubuyisela, Fransi Icandelo loKhenketho kunye noKhenketho lingalindela ukukhula konyaka malunga ne-35%, emele ukwanda kwe-38 yezigidigidi.
Iinkcukacha zikwatyhila ukuba ilizwe linokubona ukunyuka konyaka nge-21.8% ngo-2022, oko kunegalelo kuqoqosho lwe-32 yeebhiliyoni zeedola.
Umbutho wezokhenketho wehlabathi uthi ngelixa ukunyuka kohambo lwangaphakathi kunikeze isiqabu kwisizwe, akwanelanga ukuphumeza ukuchacha ngokupheleleyo okufunekayo ukusindisa uqoqosho lwalo kunye nezigidi zemisebenzi elahlekileyo ngenxa yobhubhani we-COVID-19.